Gmail. Verifying your account ဖြစ်အောင် ဖွင့်နည်း - Software Guide
Home / Account ပြုလုပ်နည်း / Gmail ဆိုင်ရာ / Gmail. Verifying your account ဖြစ်အောင် ဖွင့်နည်း
Gmail. Verifying your account ဖြစ်အောင် ဖွင့်နည်း Reviewed by Mr naing lin on 5:12:00 AM Rating: 5
Gmail. Verifying your account ဖြစ်အောင် ဖွင့်နည်း
Mr naing lin 5:12:00 AM Account ပြုလုပ်နည်း , Gmail ဆိုင်ရာ
မင်္ဂလာပါဗျာ....တောင်းဆိုထားတဲ့ သူတွေကတော့ များနေလို့ ဘာကို ပို့တင်ရမလည်းတော့ မသိတော့ဘူး။Online မှာအရေးအကြီးဆုံး ပို့လေးကိုပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အီးမေးတစ်ခု ဖွင့်တတ်ဖို့ အရမ်းလို့အပ်ပါတယ်။ ဖွင့်နည်းဖွင့်ဟန်ကိုလည်း စနစ်တစ်ကျ ဖွင့်တတ်ဖို့က လို့အပ်လိမ်မယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Gmail. Verifying your account ဖြစ်အောင်ဖွင့်တတ်ဖို့ အရမ်းလိုအပ်လို့ပါ ။Gmail. Verifying မဖြစ်ရင် ခဏခဏ ဖုန်းနံပါတ် တောင်းနေတတ်လို့ အီးမေးကို အသုံးပြုတတ်သူများ ပြောပြတာပါ။ Facebook.ဖွင့်ဖို့ အတွက်တော့ လိုအပ်မယ် မထင်ပါဘူး။ Gmail တစ်ခု ဖြစ်ရင် ပြီးတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။Online ငွေရှာလို့ နေကြတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း Gmail. Verifying လိုအပ်လို့ ဒီပို့လေးကို မတတ်တစ်ခေါက်နဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်လေး Gmail.Sign in ကို ဝင်ချင်တော့ အောက်မှာ နှိက်ဝင်လိုက်ပါ။
အောက်မှာ ပုံလေးတွေကို တစ်ခုချင်း နားလည်အောင် ဖတ်ရှုပေးပါဗျာ။
အပေါ်ပုံလေးမှာ ပြီးရင် မိမိဖုန်းကို စာအိပ်လာထိ စောင့်နေလိုက်ပါ။အောက်ပုံလေးက ဖုန်းထဲ့က စာအိပ်လေးကို ဖွင့်ပြထားတာပါ ။နောက်ပြီး တစ်ခါတလေမှာ ကြာတတ်ပါတယ်။ရောက်လာပြီးဆိုရင်တော ဖောက်ကြည့်ပြီး ဂဏန်း၆လုံးကို PC မှာ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါဗျာ။
Gmail. Verifying your account ဖြစ်သွားပါပြီးဗျာ။ အဆင်ပြေလိမ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
maryam February 16, 2020 at 2:34 AM
hamdam August 31, 2020 at 8:06 AM